राप्रपा महाधिवेशन : महामन्त्रीमा उठेकी रेखा थापा भोट माग्न व्यस्त, ‘रेखा थापा वी लभ यु’ को नारा घन्कियो (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, १६ मंसिर । राप्रपाको जारी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेद्धवारी घोषणा गरेकी रेखा थापाले मत माग्न सुरु गरेकी छिन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी राप्रपाको महाधिवेशनमा थापाले अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन पक्षबाट महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी हुन् ।
हाम्रा सहकर्मी ईश्वर कार्कीकाअनुसार अहिले थापाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग भोट माग्न थालेकी छन्। राप्रपामा एक महिलासहित तीन जना महामन्त्री रहने विधानको व्यवस्था छ। राप्रपा अध्यक्षमा कमल थापा र लिङ्देन पक्षले प्यानल नै बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका छन्।
तर निर्वाचन समितिले मतदाताको नामावली प्रकाशनलगायत चुनावी कार्यतालिकाअनुसार काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। भृकुटीमण्डपमा थापा र लिङ्देन पक्षले भोट माग्दै नाराजुलुस पनि गरेका छन्। थापाको ब्यानर बोकेका युवाहरुले ‘पूर्व–पश्चिम के भन्छ ? राजेन्द्र लिङ्देन ले भन्छ’, ‘नारी शक्ति के भन्छ ? रेखा थापा ले भन्छ’ नारा लगाएका छन् ।
नेपालमा थप १० हजार ३१९ जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौँ, १० माघ । आज नेपालमा कोरोना भाइरसका १० हजार ३१९ जना संक्रमित थपिएका छन्
पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको लागि बताससँग गरिएको सम्झौता भोलि खारेज हुने
काठमाडौं, १० माघ । पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता भोलि खारेज हुने
काठमाडौंमा ‘स्मार्ट-लकडाउन’ : जोर/विजोर उल्लंघन गर्ने सवारी साधन नियन्त्रणमा (फोटोफिचर)
काठमाडौं, १० माघ ।कोरोना महामारीको कारण काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले स्मार्ट लकडाउन लगाएको छ । खासगरी
सहिद सप्ताह सुरु (फोटोफिचर)
काठमाडौं, १० माघ : आज (सोमबार) बाट सहिद सप्ताह सुरु भएको छ । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि
उपेन्द्रले रेणुलाई किन काँध थापे ?
काठमाडौं, १० माघ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवले ‘गौर नरसंहार’ दोहोराउने अभिव्यक्ति दिएर पनि कारबाही
सरकारसँग पैसा मागेर निगमले आइओसीलाई पठायो १३ अर्ब
काठमाडौँ, १० माघ: सञ्चित बचत शून्यमा झरेपछि अप्ठ्यारोमा पुगेको नेपाल आयल निगमले सरकारसँग पैसा मागेर